Hoyga - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Waaga Cusub ee Nukliyeerka
Kusoo Biir & Taageero Ololaha!
BARASHADA WAXBARASHADA NABADDA
Dadka Waxbarashada Nabadda
DADKA WAXBARASHADA NABAD
Xubnaha Ansixinta Hay'adaha / Xubnaha Isbahaysiga
Ku soo biirista Ololaha aad ayey muhiim ugu tahay iskaashi isla markaana wax ku darsadaan isbeddel dhaqanka rabshadaha ee dhaqan ka mid ah wadahadal iyo nabad.
- Isbahaysiga Isbaanishka ee Cilmi-baarista Nabadda (AIPAZ)
Nadiifinta Waxbarashada Nabadda
Bayaanka Ololaha: “Dhaqanka nabada waxaa la gaari doonaa marka muwaadiniinta adduunka ay fahmaan dhibaatooyinka adduunka ka jira; uu leeyahay xirfad uu ku xaliyo khilaafka si wax ku ool ah; ogaadaan kuna noolaadaan heerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, jinsiga iyo sinnaanta jinsiyadda; qadariyo kala duwanaanta dhaqanka; lana ixtiraamo sharafta Dhulka. Barashada noocan oo kale ah laguma gaari karo hadaan si ula kac ah, waara loo helin oo nidaam waxbarasho loo helo nabada. ”
Khariidaynta Nabadda Barashada
Diiwaanka Caalamiga ah
Dadka Nabadda Ed
Dawacooyinka iyo Coops Digaagga* - Milicsiga "Fashilka Haweenka, Nabadda iyo Ajendaha Amniga"
Dawladaha xubnaha ka ah Qaramada Midoobay waxay ku guuldaraysteen inay gutaan waajibaadkooda UNSCR 1325, iyaga oo si toos ah u daboolaya qorshayaal hawleed aad loo shaaciyay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa cad in fashilku uusan ku jirin Ajandaha Haweenka, Nabadda iyo Amniga, iyo Qaraarka Golaha Ammaanka ee ka dhashay, balse ay ka mid tahay Dowladaha xubnaha ka ah oo dhagax-dhigay halkii ay ka fulin lahaayeen Qorshayaasha Qaranka. "Aaway dumarkii?" afhayeenka golaha amaanka ayaa dhawaan waydiiyay. Sida Betty Reardon ay eegayso, haweenku waxay ku sugan yihiin goobta, iyagoo ka shaqeynaya ficillo toos ah si ay u fuliyaan ajendaha. [sii wad akhriska…]
Warqad furan oo ku socota Anthony Blinken oo ku baaqaya hab-raaca fiisaha hufan oo hufan ee aqoonyahannada Afqaanistaan ​​ee khatarta ku jira
Codsigan ay aqoonyahannada Maraykanku u jeediyeen Xoghayaha Arrimaha Dibadda waxa uu ku baaqayaa in tallaabo laga qaado caqabadaha hortaagan hab-raaca fiisaha hufan ee loo siman yahay ee aqoonyahannada Afqaanistaan ​​ee khatarta ku jira. Waxaan ku martiqaadeynaa dhammaanba inay ku faafiyaan warqadda shabakadahooda oo ku dhiirigeliso Maraykanka inay u soo diraan Senatoradooda iyo Wakiiladooda. [sii wad akhriska…]
Arrinta Cusub ee In Factis Pax: Joornaalka Waxbarashada Nabadda iyo Caddaaladda Bulshada hadda la daabacay
In Factis Pax waa joornaal online ah oo dib loo eegay ee waxbarashada nabadda iyo cadaalada bulshada. Arrinta cusub: Vol. 16, No. 1, 2022. [sii wad akhriska…]
Waxa aan ka aqaano nolosha bini'aadamka sida Nuclear Downwinder
Mary Dickson waa ka badbaaday tijaabinta hubka nukliyeerka. Tobannaankii sano ee la soo dhaafay tan iyo tijaabooyinkii ugu horreeyay ee goobta tijaabada Nevada, dhibbanayaasha tijaabada nukliyeerka waxay la kulmeen dhimasho, cimri xaddidan, iyo nolol xanuun iyo naafo jireed. Dickson wuxuu raadiyaa la xisaabtanka iyo magdhowga dhibbanayaasha kale, arrimaha la tixgeliyo si loo qiimeeyo anshaxa siyaasadda nukliyeerka. [sii wad akhriska…]
Bayaan wadajir ah oo ka soo baxay Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay oo ku aaddan maalinta caalamiga ah ee ciribtirka xadgudubyada galmada ee colaadaha (June 19)
Bayaankan wadajirka ah ayaa ah mid mudan in ay akhriyaan barayaasha nabada oo saldhig u ah baaritaan ku saabsan xiriirka muhiimka ah ee xuquuqda aadanaha ee haweenka si loo gaaro nabad xaq ah oo xasilloon. [sii wad akhriska…]
Khatarta Nukliyeerka, Amniga Guud iyo Hub ka dhigista (New Zealand)
Sannadkii 1986kii dawladda New Zealand waxay qaadatay hab-raacyada Cilmi-baarista Nabadda si loogu soo bandhigo waxbarashada nabadda manhajka dugsiga. Sannadkii xigay, baarlamaanku waxa uu ansixiyay sharci mamnuucaya hubka nukliyeerka - iyada oo la raacayo siyaasadda isbeddelka amniga guud ee ku salaysan siyaasadda dibadda. Maqaalkan, Alyn Ware wuxuu xusayaa sannad-guuradii 35-aad ee sharciga ka xorta ah nukliyeerka, wuxuu muujinayaa xiriirka ka dhexeeya waxbarashada nabadda iyo isbeddelka siyaasadda amniga, wuxuuna ku talinayaa tallaabo dheeraad ah oo loogu talagalay dawladda iyo New Zealanders si ay gacan uga geystaan ​​baabi'inta hubka nukliyeerka adduunka. [sii wad akhriska…]
Maamulka ayaa ka ilaaliya Afgaanistaan ​​inay ku soo laabtaan Khatarta
U-doodayaasha Aqoonyahannada Haweenka Afgaanistaan ​​​​iyo Xirfadlayaasha, oo ka mid ah kooxo badan oo u dadaalaya in ay badbaadiyaan dadka Afgaanistaan ​​khatarta ku jira, waxay soo dhaweynayaan tallaabadan horay loo qaaday ee Waaxyaha Dawladda iyo Amniga Gudaha ee ansixinta Sharciga Wax-ka-beddelka Afgaanistaan ​​ee ay halkan ku soo warrameen Xuquuqda Aadanaha First. [sii wad akhriska…]
Waxbarashada Nabadda: Sannad dib u eegis iyo Milicsi (2021)
Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda, iyo bulshadeeda la-hawlgalayaasha ah iyo barayaasha gaarka ah, waxay si hagar la'aan ah uga shaqeeyeen sidii loo dhisi lahaa adduun badan oo nabad ah iyada oo loo marayo waxbarashada 2021. Akhri warbixinteena kooban ee horumarka iyo waxqabadyada, oo qaado daqiiqad si aad u dabaaldegto guulaha aan wadaagno. [sii wad akhriska…]
Xidhiidhka Aadamiga Oo Ku Been Abuuray Silica Aadanaha
Waxyaabaha la iska indho-tiray ee ku jira waayo-aragnimada COVID waa sida ay noogu horseedi karto dib-u-eegis ku saabsan xidhiidhada bani-aadmiga ee innaga gudbiya silica, ina siinaya dareen jireed oo dhab ah oo ah xubin ka mid ah qoys bini'aadam ah, oo awood u leh in aan is daryeelno, sida ay waajib nagu tahay. haddii qoysku noolaado. Qoraalkani waa tusaale cad oo waayo aragnimadan ah. [sii wad akhriska…]
Dhibaatada Maalinta Haweenka Caalamiga ah ee Ixtiraamka leh - Codsi Dhibaato Wanaagsan (Maalinta Haweenka Adduunka ee 2021)
Maqaalkani, oo ay wada qoreen haweeney afrikaan ah, ayaa waxay nooga digeysaa wadajirka dhaqdhaqaaqa haweenka taas oo awood u siinaysa dhismayaasha awooda inay iska caabbiyaan isbadalka lataaban karo iyo nidaamka ee looga baahan yahay in lagu gaaro sinaanta aadanaha. [sii wad akhriska…]
Mustaqbalku Waa Hada: Waa Fursad Barasho Oo Loogu Tala Galay Waxbarashada Nabadda
Tony Jenkins wuxuu ku doodayaa in COVID-19 ay muujineyso in "waxbarashada nabada ay u baahan tahay in si weyn xoogga loo saaro mustaqbalka - si gaar ah, in la odoroso, la naqshadeeyo, la qorsheeyo lana dhiso mustaqbalka la doorbido." [sii wad akhriska…]
COVID-19: Qiyaastii 23.8 Million Carruur ah oo Kale ayaa Ka Baxi doonta Dugsiga
Wadamada horumarka aadanaha hooseeyo waxay wajahayaan culeyska ugu weyn ee xirnaanshaha iskuulka, iyadoo in ka badan 85 boqolkiiba ardaydooda si wax ku ool ah uga maqnaan doonaan iskuulka marka la gaaro rubuca labaad ee sanadka 2020, sida lagu sheegay warbixin kooban oo ay soo saartay Qaramada Midoobay oo ku saabsan saameynta COVID-19 ee waxbarashada. [sii wad akhriska…]
Akhriso qoraalka buuxa ee khudbadii Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ee khudbadii Nelson Mandela Annual Lecture 2020 khudbadiisii ​​“La Dagaalanka Faa’iido la’aanta Faafida,” halkaasoo uu ku qeexayo aragtida heshiis cusub oo bulsheed iyo Hiigsiga Cusub ee Caalamiga ah. [sii wad akhriska…]
Dhibaatooyinka isku dhafan: Corona ee aagagga isku dhaca
Qoraaladii hore ee taxanaheena Corona Connections waxay inta badan diirada saareen cadaalad darada iyo cillad xumada dhismayaasha caalamka oo si aan la inkiri karin u cadeeyay faafa. Qodobkaan, waxaan ugu yeeraynaa barayaasha nabada xaqiiqda COVID waxay kadhigtay inbadan oo kamid ah cadaalad daradaas mid daran. [sii wad akhriska…]
WARAR & HOGAAMINTA
Kaydinta Nukliyeerka waxaa Mamnuucay Heshiiska Mamnuucidda Nukliyeerka
Xuska iyo Ballanqaadka: Diiwaangelinta Juun 12, 1982 sidii Bandhig nololeed
Tandem Peace - Ka hortagga iyo xallinta khilaafaadka iyada oo la adeegsanayo isweydaarsiga luqadda
Martin Luther King iyo Sheekada Montgomery - Manhajka iyo Hagaha Daraasadda (Isbahaysiga Dib-u-heshiisiinta)
Farriin degdeg ah oo ku wajahan bini'aadminimada - ka timid shinni shaqaale ah
Matxafyada Nabadda: Khayraadka
Ku soo biir ololaha
Ka Tagaya Dagaalkii Labaad ee Adduunka
7: am 00 - 9: am 00 EDT noq
Taxanaha Webinar: Barashada Wax-ka-beddelka ee Nabadda iyo Dhisidda Adkeysiga iyo Ka-hortagga Xag-jirnimada Rabshadaha
#NoWar2022: Iska caabin & Dib-u-soo-noolayn, shir caalami ah oo macmal ah
IIPE México: Machadka Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda 2022
Maalinta oo dhan noq
Maalinta Dhalinyarada Adduunka
Georg Arnhold Shirarka Caalamiga ah ee Xagaaga: Waxbarasho nabadeed ka-saarid
Maalinta Caalamka ee Nabada
CURRICULA BILAASH AH
Hubka Nukliyeerka iyo Dagaalka Ukraine: Baaq walaac ah
NGO-gu wuxuu 5,000 ku tababbaray waxbarashada nabadda ee Adamawa (Nigeria)
Fursadaha Shaqooyinka / Maalgelinta
Wac codsiyada: Cora Weiss Fellowship ee Nabad-dhisayaasha Haweenka da'da yar
Waxaa laga yaabaa 24, 2022 0
Daabacadaha & Faallooyinka Buugaagta
Wac wax ku biirinta Mugga Dib-u-qeexidda Amniga, "Fikirka Feminists ee Amniga Caalamiga ah: Ka-hortagga Xasaradaha Jirta ee Is-daba-jooga"
Friedensstark – muuqaal cusub oo wax barasho nabadeed ee Mu'asasada Berghof
Bayaanka Ololaha & Yoolalka
Dhaqan nabadeed ayaa la gaari doonaa marka muwaadiniinta adduunka ay fahmaan dhibaatooyinka adduunka ka jira; uu leeyahay xirfad uu ku xaliyo khilaafka si wax ku ool ah; ogaadaan kuna noolaadaan heerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, jinsiga iyo sinnaanta jinsiyadda; qadariyo kala duwanaanta dhaqanka; lana ixtiraamo sharafta Dhulka. Barashada noocan oo kale ah laguma gaari karo hadaan si ula kac ah, waara loo helin oo nidaam waxbarasho loo helo nabada. ”
1. Marka hore, in la dhiso wacyiga bulshada iyo taageerada siyaasadeed ee ku aaddan soo bandhigida waxbarashada nabadda ee dhammaan dhinacyada waxbarashada, oo ay ku jiraan waxbarashada dadban, dhammaan dugsiyada adduunka oo dhan.
2. Ta labaad, in kor loo qaado waxbarashada dhammaan macallimiinta si loo baro nabadda.
Xusuusta qoob-ka-ciyaarka gambaleelka: hormoodka, barbaariyaha caddaaladda bulshada ee is-goysyada
Tauheedah Baker: ka saarida cunsuriyada fasalka dhexdiisa
Tony Jenkins: waxbarashada ku saabsan iyo nabadda
Basma Hajir & Kevin Kester oo ku saabsan doorka Waxbarashada Khatarta ah ee Nabadda
Daisaku Ikeda oo ku saabsan waxbarashada nabadda
Tony Jenkins: barashada nabada ee wakaalada siyaasada
MLK: Ujeedada Waxbarashada
Sir Joseph Rotblat: waxbarashada nabada aduunka aan dagaal ka madax banaaneyn
David Hicks: kobcinta aragtida mustaqbalka